Home > News > Market ချဲ့ထွင်နည်းများ
၁။ ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ခြင်းနည်း (Market Penetration)
ဒီနည်းကတော့ ပူးတွဲပါပုံမှာမြင်ရတဲ့ အတိုင်း ရှိပြီးသားဈေးကွက်မှာ ရှိပြီးသား ကုန်စည်ကို လူအများပိုမိုသိရှိသုံးစွဲလာ အောင် ပစ္စည်းကို ပိုမိုလက်ခံလာအောင် ပြုလုပ်တဲ့နည်းပါ။ မိမိရဲ့ပစ္စည်းဟာ သဘာဝအရ ဆန်းသစ်တီထွင်ရန် အခွင့်အလမ်းနည်းသည့်ပစ္စည်းမျိုး (ဥပမာ-ဘုန်းကြီးသင်္ဃန်း) ဆိုလျှင် ဈေးကွက်အတွင်းရှိ အခြားပြိုင်ဖက် များထက်သာလွန်သည်ဟု ဝယ်သူထင်မှတ်လာစေရန် မီဒီယာမျိုးစုံကိုအသုံး ပြုကြော်ငြာတဲ့နည်းလမ်း (Heavily Advertising)ကိုလုပ်ကြပါ တယ်။
၂။ ထုတ်ကုန်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနည်း (Product Development)
ရှိပြီးသားဈေးကွက်အတွင်းမှာ မိမိထုတ် ကုန်ကို အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာအ ဆင့်မြှင့်တင်ပြီး လူကြိုက်များလာအောင် လုပ်တဲ့နည်းပါ။ လက်ရှိစားသုံးသူများတွေ့ကြုံ နေရသည့် အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းပေးရန် (သို့မဟုတ်) လက်ရှိပစ္စည်းထက်
ပိုပြီးလွယ်ကူချောမွေ့ လုံခြုံ အဆင်ပြေ တဲ့ပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် ပုံစံဒီဇိုင်းဆန်းသစ်တဲ့ပစ္စည်း လုပ်ဆောင်ချက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ပစ္စည်းများကိုပြုလုပ်ပြီး ပြိုင်ဖက်ပစ္စည်း ကိုစွန့်လွှတ်ပြီး ဆန်းသစ်တီထွှင်ထား သည့်မိမိ၏ပစ္စည်းကိုသုံးစွဲလာစေရန် ဆွဲ ဆောင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းအမျိုးအစားအရ ဆန်းသစ်တီထွှင် ရန်အခွင့်အလမ်းရှိပြီး မိမိကလဲ ဆန်းသစ်တီထွှင်နိုင်စွမ်းရှိရပါမည်။
၃။ ဈေးကွက်အသစ်ရှာဖွေခြင်း (Market Development)
ရှိပြီးသားကုန်စည်အတွက် ဈေးကွက်အ သစ်ချဲ့ထွင်ရှာဖွေနည်းပါ။ သုံးနည်းရှိပါတယ်။
၁။ နေရာဒေသသစ် (New region) သို့ဝင်ရောက်ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြစါတယ်။ ဥပမာ ရန်ကုန်မှာလူကြိုက်များတဲ့ (YKKO) ကြေးအိုးဆိုင်တွေကို တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ လိုက်လံချဲ့ထွင်လိုက်တာမျိုးပေါ့။ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းပါ။ ဒါပေမယ့် အရင်းအနှီးထပ်မံတိုးချဲ့မြှုပ်နှံနိုင်ရ ပါမယ်။
၂။ ဝယ်ယူသူအုပ်စုအသစ် (New group) ကိုစွဲဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Johnson & Johnson က ကလေးသုံး ပစ္စည်းတွေကို လူလတ်ပိုင်း (Older Adults ) အသက် ၄၀/၅၀ များသုံးစွဲလာစေရန် ဆွဲဆောင်ခြင်း (Idea marketing) နည်းလမ်းပါ။ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါလူတွေရဲ့အသား အရေဟာကလေးငယ်များလိုပြန်ဖြစ်လာ ပြီးကလေးသုံးဆပ်ပြာ ပေါင်ဒါ မျက်နှာသစ်ဆေးတို့ကို အသုံးပြုသင့် ကြောင်း စိတ်ကူးစိတ်သန်းထည့်ပေး တဲ့နည်းမျိုးပေါ့။
၃။အသုံးဝင်မှုအသစ် (New use) ကိုရှာဖွေခြင်းပါ။ ဥပမာ မော်တော်ဆိုင်ကို သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်လိုက်ခြင်းမျိုးပေါ့။
၄။ ပစ္စည်းသစ်ဈေးကွက်သစ်ထိုးဖောက်နည်း (Diversification)
သူကတော့ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ကို ဈေးကွက်အသစ်ရှာပြီးထိုးဖောက်နည်းပါ ဈေးကွက်အတွက် လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေ ရှာဖွေစုဆောင်းသုံးသပ်ပြီး ဈေးကွက်ချဲ့ ထွင်ရေးဗျူဟာများဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
၁။ ကုန်ကြမ်းကိုအခြား (Supplier) ထံမှ ဝယ်ယူနေရာမှ ကိုယ်တိုင်ကုန်ကြမ်းပြု လုပ်ပြီးထိုကုန်ကြမ်းကိုမိမိကိုယ်တိုင် အသုံဗးပြုယုံသာမက မိမိကဲ့သို့အသုံး ပြုနေရသောအခြားလုပ်ငန်းများသို့ ရောင်းချခြင်း။
၂။ မိမိ၏လက်ရှိလုပ်ငန်းနှင်ဆက်စပ် သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုထပ်မံတိုးချဲ့ခြင်း။ ဥပမာ-ဥပမာသုံးစွဲရသည့်ပရဆေးပစ္စည်း တူညီမှုကိုအကြောင်းပြု၍ ဆေးဝါးထုတ် လုပ်နေရာမှ အလှကုန်အဖြစ်တိုးချဲ့ထုတ်လုပ်ခြင်းမျိုး။
၃။ လက်ရှိလုပ်နေသည့်အလုပနှင့် လုံးဝ အဆက်အစပ်မရှိသော လုပ်ငန်းကို ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်း အလားလာကောင်းခြင်းကြောင့် တိုးချဲ့ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဥပမာ- စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းအပြင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပါ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။
၄။ လက်ရှိလက်လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိသော်လည်း လက်ရှိ Customer များအတွက် လုပ်ငန်သစ်ချဲ့ထွင်ခြင်း။ ဥပမာ-ဟိုတယ်ဆောက်လုပ်ပေးရာမှ ရရှိလာသော ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက်လိုအပ်သော ပရိဘောဂ များ ပေးသွင်းရန် ပရိဘောဂ လုပ်ငန်းသစ် တည်ထောင်လုပ်ကိုင်ခြင်းမျိုး။
အထက်ဖော်ပြခဲ့သော ဈေးကွက် ထိုးဖောက်နည်းများမှ မိမိလုပ်ငန်း အရင်းအနှီးပမာဏ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစားပေါ်မူတည်၍ အဆင်ပြေမည့် နည်းကိုအသုံးပြု ဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြင့် အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။
credit: Free Learning Management - Myanmar
MARKETING (R&D) ဈေးကွက်သုသေသနပြုမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတ
စီးပွားရေးသဘောအရ Market Segmentation (ဈေးကွက်တွင်း မတူညီစွာခွဲခြားသတ်မှတ်မှုများ) ဖြစ်တဲ့ Geographic – Region, State, City, Township level: နေရာဒေသနှင့် ဆိုင်သော - ပြည်နယ်၊ တိုင်း၊ မြို့၊ မြို့နယ် အဆင့်များ မတူညီခြင...
Social Media နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက် (၅) ချက်
Social Media တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ပိုပိုပြီး နေရာရယူလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ်ထိ Facebook သုံးနေသူတွေ၊ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဘာပုံပဲရိုက်ရိုက် Facebook န...
ဘ၀အောင်မြင်ဖို့ List ၈ခု
*** သင့်ဘ၀အောင်မြင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားရမယ့် List ၈ခု ***ကျနော်တို့ အားလုံးဟာ ကျနော်တို့ ဘ၀တွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့လူတွေ၊ အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေ၊ အရေးကြီးတဲ့ ခံယူချက်တွေ ကိုယ်စ...
Saleman တိုင်းသိထားသင့်တဲ့ အချက်(၅)ခု
အရောင်းပညာက အသုံးမ၀င်တော့ဘူးလို့ ထင်ပါသလား ? နည်းပညာတွေက အစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် အရောင်းသမားတွေ မလိုတော့ဘူးလို့ ယူဆထားပါသလား ? သေချာတာတစ်ခုက ဒီလိုဘယ်တေ...
အရောင်းသမားတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ (5) ချက်...
အရောင်းသမားတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ အချက်(၅)ခု အရောင်းပညာက အသုံးမ၀င်တော့ဘူးလို့ ထင်ပါသလား ? နည်းပညာတွေက အစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် အရောင်းသမားတွေ မလိုတော့ဘူးလိ...
သင့် ဖောက်သည်များနဲ့ ပုပေါင်းပြီး လုပ်ငန်းကို တည်ဆောက်ပါ။ စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ဖို့ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ ခေါင်း...